Review Top 4 Máy Đẩy Tinh Chất Loại Nào Tốt Nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Review Top 4 Máy Đẩy Tinh Chất Loại Nào Tốt Nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Review Top 4 Máy Đẩy Tinh Chất Loại Nào Tốt Nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Udinga ukufunda ngama-essence pushers futhi ungazi ukuthi iyiphi ongayithenga? Landela isihloko esilandelayo ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nemishini yekhwalithi.
Kusukela eminyakeni engu-25 kuya phambili, isikhumba sethu sibonisa izimpawu zokuguga futhi asisacwebezeli njengakuqala. Ngakho-ke, abesifazane abaningi bazodinga ukwengeza ezinye izinhlobo zezinhlamvu zokubuyisela esikhumbeni.
Ngaphezu kwamaski namakhilimu, i-essence pusher Kuyithuluzi eliwusizo ukusiza isikhumba ukubamba imisoco kangcono. Funda isihloko esingezansi ukuze ufunde kabanzi ngalolu hlobo lomshini wokunakekelwa kwesikhumba sobuso.
Imikhiqizo emi-3 Ethengiswa Kakhulu
1 Thola ukuthi yini i-essence pusher?
1.1 Ubuchwepheshe bogesi wama-ion aphikisayo (-) kanye nama-positive (+).
1.2 Umshini unomsebenzi wokushisa
1.3 Idivayisi inokukhanya kwebhayoloji nobuchwepheshe bokudlidliza
2 Amaphusha aphezulu angu-4 afunwa ngabantu abaningi
2.1 1. I-Halio
2.2 2. I-Pebble Fleur 2. I-Essence Pusher
2.3 3. I-Essence pusher I-Maxcare I-Max888PRO
2.4 4. I-Lanaform PureSkin Essence kanye ne-Skin Care Electrophoresis
3 Kungani usebenzise i-essence pusher?
3.1 Umshini usiza ekujuleni kokuhlanza isikhumba
3.2 I-essence pusher isebenza ukusiza isikhumba ukuthi sibambe imisoco kangcono
3.3 Umshini ukhulisa amandla esikhumba okumunca umswakama
3.4 Umshini uthuthukisa ikhono lokujikeleza kwegazi ngaphansi kwesikhumba
4 Imibuzo mayelana nokusetshenziswa kwe-essence pushers
4.1 Ingabe ibhethri lidinga ukushajwa ngaphambi kokusetshenziswa?
4.2 Ingabe umshini we-electrophoresis kufanele uhlanzwe ngensipho namanzi?
4.3 Ingabe i-essence pusher ingasetshenziswa kubantu abanezinsimbi?
4.4 Yisiphi isikhathi sosuku okufanele ngisebenzise i-essence pusher?
4.5 Kukusiphi isimo lapho isikhumba akufanele sisebenzise umshini we-electrophoresis essence?
Thola ukuthi yini i-essence pusher?
I-Essence pusher Kuyidivayisi enhle yokunakekelwa kwesikhumba sobuso. Kuyasiza ukusunduza imisoco evela kuma-serum, imaski noma okhilimu ekujuleni kwezingqimba zesikhumba. Ukusuka lapho, yondla amangqamuzana esikhumba ngaphakathi futhi isiza isikhumba ukuba sicwebezele, sibushelelezi, sinciphise imibimbi.
essence pusher aka essence electrophoresis umshini
Ukusebenzisa umshini nsuku zonke kuzokusiza ukuba ube nesikhumba esinempilo nesiqhakazile. Imvamisa, kumamodeli athengiswa emakethe namuhla, kuzoba nobuchwepheshe obufana nalokhu:
Ubuchwepheshe bogesi wama-ion aphikisayo (-) kanye nama-positive (+).
Izinto ezingcolile ezitholakala ekujuleni kwesikhumba esikhunjeni zivame ukuthwala (-) ishaja kagesi. Ngakho-ke, indlela evamile yokugeza ubuso izohlanza kuphela indawo, hhayi ukuhlanza ngokujulile isikhumba. Khonamanjalo, umshini we-electrophoresis uqukethe ama-ion (+) asebenza ukuze akhiphe lokhu kungcola.
I-ion (-) yedivayisi izosiza ukuthuthukisa ikhono lesikhumba lokumunca umoya-mpilo kanye nokunciphisa i-sebum. Isebenza nokuvula indlela yokuthi imisoco kakhilimu, ama-serum, njll. ingene ijule esikhunjeni.
Umshini unomsebenzi wokushisa
Imigqa i-essence pusher manje inomsebenzi wokushintsha izinga lokushisa elishisayo nelibandayo. Amazinga okushisa ashisayo ngokuvamile azosetshenziselwa ukuhlanza kanye nezinyathelo zokuthambisa. Ngoba inomphumela wokuvula izimbotshana ukusiza ukususa ukungcola kalula.
I-Pebble Fleur – uhlobo lwe-essence pusher olushisayo njengamanje
Izinga lokushisa elibandayo lizosetshenziswa ngemva kokugeza ubuso, ukusebenzisa i-lotion noma ukusebenzisa imaski yeshidi. Isizathu yingoba lokhu kushisa kusiza ukuqinisa izimbotshana nokugcina izakhamzimba ngaphakathi esikhunjeni.
Idivayisi inokukhanya kwebhayoloji nobuchwepheshe bokudlidliza
Ngaphezu kokulungisa izinga lokushisa elishisayo / elibandayo ngokuzenzakalelayo, umshini we-essence electrophoresis uhlanganisa nobunye ubuchwepheshe. Ukukhanya kwebhayoloji nokudlidliza okungena enqubweni yokunakekelwa kwesikhumba sobuso. Uma lezi ezimbili zihlanganisiwe, kuba massage yobuso evuselelayo.
Amaphusha aphezulu angu-4 afunwa ngabantu abaningi
Umshini wamanje we-essence electrophoresis awuyona into engavamile kumakholwa e-skincare. Kuyithuluzi eliwusizo ukusiza abesifazane bagcine isikhumba sabo singagugi.
Kodwa-ke, uma utshala imali emshinini omuhle osebenza kahle kakhulu, ke akufanele abe nobugovu abathanda ubuhle. Sicela ukhethe umkhiqizo ongu-1 ezinhle & ezithengekayo Ngiyacela.
Nansi imigqa best essence pusher yaziswa kakhulu abasebenzisi abaningi ngekhwalithi ongabhekisa kuyo:
Oda kuTiki(Okwangempela) Oda eShopee Order eLazada
IHalio ingenye yezinhlobo ezidumile zemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba eVietnam. Ngaphandle komshini wokuwasha ubuso odumile, inkampani iphinde yethula umshini wokunakekelwa kwesikhumba essence electrophoresis. Lona omunye waleyo mikhiqizo okufanele uthenge.
Umshini we-electrophoresis we-Halio usetshenziswa ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe be-Ion Galvanic obukhethekile kumaspa. Ngenxa yalokho, umshini uyakwazi ukuphusha i-essence emhlophe ijule engxenyeni ngayinye yesikhumba. Ukusuka lapho, isikhumba somsebenzisi siba mhlophe futhi sikhanye ngemva kwamaviki angu-2 kuphela okusetshenziswa.
Umshini we-Halio electrophoresis unomklamo ohlangene, ngakho-ke kulula ukuwuthwala uye emsebenzini noma ekuhambeni
Umshini unemodi ye-Deep Clean ehlanza ngokujulile futhi isuse ukungcola esikhumbeni
Ukusebenzisa idivayisi njalo kusiza isikhumba somsebenzisi sinciphise izinduna
Umshini we-Halio usetshenziselwa ukwandisa ukukhiqizwa kwe-collagen, ukuthuthukisa umbala wesikhumba
Umshini unemodi yokupholisa efika ku-10C uma kuqhathaniswa nezinga lokushisa legumbi ukusiza ukuqinisa izimbotshana nokukhiya imisoco.
Umshini we-Halio awubafanele abantu abane-atopic dermatitis noma isikhumba esibucayi
Abantu abanomlando wesifo senhliziyo nemithambo yegazi akufanele basebenzise idivayisi ye-Halio .electrophoresis
Abesifazane abakhulelwe, abantu abanezinsimbi noma izifakelo zamazinyo akufanele bawusebenzise lo mshini
Intengo yedivayisi iphezulu kakhulu, ngakho-ke ayifanele iphakethe labafundi
2. I-Pebble Fleur 2. I-Essence Pusher
I-Essence pusher I-Pebble Fleur iwumkhiqizo ohlangabezana nazo zonke izidingo zokunakekelwa kwesikhumba zabasebenzisi. Inamandla okumunca ukungcola, i-sebum noma izinsalela zezimonyo ezifihlwe ekujuleni kwesikhumba. Ngenxa yobuchwepheshe be-Ion (-) ne-Ion (+), le divayisi inamandla okuvula ama-pores ngempumelelo.
Xem Thêm Hỗ Trợ Sản Phẩm Máy Rửa Bát Electrolux | Muasalebang
Ngaphandle kwalokho, umshini wePebble Fleur nawo unobuchwepheshe beMicro-PAT ukusiza isikhumba simunce umsoco. Ukusebenzisa lo mshini nsuku zonke kuzonikeza abasebenzisi isikhumba esibushelelezi nesicwebezelayo.
Lo mshini usetshenziselwa bani?
Idivayisi isetshenziselwa isikhumba esiguga ngaphambi kwesikhathi, noma ukuvimbela ukuguga, amaholoholo, isikhumba esimnyama, esimnyama, esingaphili.
Lo mshini ngowaluphi uhlobo lwesikhumba?
Idivayisi ingasetshenziselwa zonke izinhlobo zesikhumba. Kodwa-ke, uma isikhumba sinezinkinga ze-acne ezivuthayo, kufanele unciphise ukusetshenziswa kwedivayisi kulawo mabala. Ukuze uthole ama-blackheads noma i-acne bran ingasetshenziswa ukuvimbela nokukhawulela.
Umshini wePebble Fleur unamandla okubona izithako zeFluorescent kokhilimu ukugwema ukulimaza isikhumba
Umshini unemodi yokuhlanza ukusiza abasebenzisi ukuthi basuse isicoci sezimonyo kunokugeza ubuso okuvamile
Imodi ye-Pebble Fleur’s hot and massage isiza ukuphakamisa ubuso, idale indlela yokuthi i-essence ingene ijule esikhumbeni.
Umshini wePebble Fleur nawo unemodi yokuvuselela enciphisa izimbotshana futhi ivale umswakama esikhumbeni
Uhlobo lwesikhiphi sezimonyo esisetshenziselwa umshini wePebble Fleur kumele lube luncane
3. I-Essence pusher I-Maxcare I-Max888PRO
I-Max888PRO evela ku-Maxcare brand spa-standard spa-imishini yokunakekela isikhumba ekhaya. Inezici eziningi ezivelele ukusiza ukunikeza abasebenzisi isikhumba esibushelelezi nesinempilo.
Lo mshini ufakwe ubuchwepheshe be-Galvanic Ion ukuthuthukisa ikhono lesikhumba lokumunca umsoco. Akukhona lokho kuphela, umshini futhi ufaka ukushisa kwe-F-Vibration + 45 degrees ngomphumela wokuhlanza ojulile. Noma yikuphi ukungcola, i-sebum noma izinsalela zezimonyo eziqoqwe ngaphansi kwesikhumba zizosuswa ngokuphelele ngalo mshini.
Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo usiza ukugcwalisa futhi usunduze izithako ezisebenzayo ekujuleni kwesikhumba, usize isikhumba ukuba sibambe imisoco ngokushesha futhi sithuthukise isikhumba kusuka ngaphakathi nangaphandle. Umkhiqizo uhlanganisa ithiphu yokupholisa ukusiza ukuqinisa izimbotshana nokusiza isikhumba esiqinile.
Ukusetshenziswa njalo komkhiqizo kuzokunikeza ubuso obushelelezi nobusha.
Imodi yokuhlanza ejulile yomshini we-Max888PRO inamandla okwandisa ukumuncwa kahle kwemisoco
Umshini unemodi yokumunca Ngokugcwele esiza ukwenza indlela yokuthi imisoco ingene ijule kungqimba ngalunye lwamaseli esikhumba
Imodi Yokuswakama yedivayisi inamandla okuthambisa isikhumba futhi isisize sihlale sibushelelezi ngenkathi eyomile
Intengo iphakeme kakhulu, ngakho ayibafanele abafundi
4. I-Lanaform PureSkin Essence kanye ne-Skin Care Electrophoresis
I-Lanaform PureSkin 6-in-1 essence kanye nomshini wokunakekelwa kwesikhumba we-electrophoresis kuthathwa njengenguquko entsha ekulethweni kwezakhi kulwelwesi lwamaseli esikhumbeni ngaphandle kokudala umonakalo – Umphumela ulingana nezindlela ezinjengomjovo oqondile wezakhi.
Kungaqondwa kalula nje ukuthi i-Electroporation Technology iyindlela yokuletha imisoco ongqimbeni lwesikhumba sesikhumba ngokusebenzisa umshini wokushaya kagesi osiza ukukhuthaza ukunyakaza kwama-molecule ngokusebenzisa izicubu ngesikhathi se-electrophoresis.
Xem Thêm Mua Máy In Laser Brother HL-L2366DW Chính Hãng, Giá Tốt | Muasalebang
I-Lanaform PureSkin 6-in-1 essence kanye nomshini wokunakekelwa kwesikhumba i-electrophoresis ifakwe izindlela ezi-6 zokunakekela isikhumba:
Ukuhlanza : Imodi yokuhlanza okujulile
Ukondla: Imodi yokuphusha okunomsoco isiza ukumunca kufika ku-90% wemisoco emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba
Ukuphakamisa: Ukuqinisa isikhumba kanye nemodi yokuphakamisa, ukubunjwa komugqa we-V
Ukupholisa: Imodi ethambisa isikhumba futhi ilawule ukukhiqizwa kwe-sebum.
I-Massage: Imodi yokuphumula epholile isiza ukunwebeka kwesikhumba kanye nobusha.
I-Photon: Imodi ekhanyayo yokuvuselela isikhumba, ukwandisa i-collagen, ukwelapha izinduna
Kungani usebenzise i-essence pusher?
Namuhla, abesifazane abaningi bayaqaphela ukubaluleka kokunakekelwa kwesikhumba. Yingakho bejahe ukuthenga i-essence pusher mayelana ne-skincare ngoba iletha imiphumela efana nale:
Umshini usiza ekujuleni kokuhlanza isikhumba
Ukugeza ubuso bakho ngesandla nge-cleaser kuzokusiza kuphela ukususa ungqimba lokungcola ebusweni besikhumba. Ngokuqondene nomshini we-electrophoresis essence, le divayisi ikhiqiza ukushisa ukuze kwandiswe ama-pores. Ngaleyo ndlela idala izimo ze-Ion (+) ukuze imunce ukungcola nesikhumba esicacile, inciphise ukubukeka kwezinduna.
I-essence pusher isebenza ukusiza isikhumba ukuthi sibambe imisoco kangcono
Ngaphandle kokuhlanza okujulile kwesikhumba, umshini we-electrophoresis usiza futhi i-essence ukuthi ingene esikhumbeni ngokushesha. Ngenxa yalokhu, isikhumba somsebenzisi sizomunca zonke izakhamzimba emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba.
Umshini ukhulisa amandla esikhumba okumunca umswakama
Lapho imisoco evela ku-lotion ingena ekujuleni ngaphakathi ngenxa yomshini we-electrophoresis essence. Isikhumba sakho sizoba bushelelezi, siminyene futhi singomi kalula, siqhekeke. Konke ngoba lo mshini uye wasiza ekunciphiseni izimbotshana ukuze amanzi angaphansi kwesikhumba angahwamuki.
Umshini uthuthukisa ikhono lokujikeleza kwegazi ngaphansi kwesikhumba
Imodi yokudlidliza yamaza omsindo ehlanganiswe nokukhanya kwebhayoloji yomshini we-electrophoresis iyakwazi ukubhucunga isikhumba. Isiza ukugeleza kwegazi ngaphansi kwesikhumba kangcono, okwenza isikhumba siqine futhi sibe bomvu. Ningawusebenzisa nobabili lo mshini futhi nihlanganise massage emnene ukuze uphakamise imisipha yobuso.
Imibuzo mayelana nokusetshenziswa kwe-essence pushers
Njengento eletha imisebenzi eminingi ewusizo, akunzima ukuyiqonda lapho isidingo se-electrophoresis sikhuphuka. Ngaphandle kokunaka intengo, abasebenzisi baphinde babuze imibuzo eminingi lapho besebenzisa lo mshini. Isb:
Ingabe ibhethri lidinga ukushajwa ngaphambi kokusetshenziswa?
Ukuze umshini we-ion electrophoresis oshisayo noma obandayo usebenze esikhumbeni, abasebenzisi kufanele bashaje ibhethri ngaphambi kokuwusebenzisa. Lokhu kuzosiza umshini ube namandla anele okusebenza ngezikhathi eziningi zokunakekelwa kwesikhumba ezilandelayo.
Ingabe umshini we-electrophoresis kufanele uhlanzwe ngensipho namanzi?
Amanye amamodeli we-electrophoresis awakwazi ukumelana namanzi, ngakho-ke udinga ukuqaphela lapho uhlanza idivayisi. Ungasebenzisi insipho namanzi ukugeza umshini, kodwa sebenzisa indwangu ehlanzekile, eyomile ukuze usule eduze komshini. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi ugweme ukusebenzisa idivayisi endlini yokugezela ngoba umusi ungalimaza idivayisi.
Ingabe i-essence pusher ingasetshenziswa kubantu abanezinsimbi?
Abantu abasenqubweni yokufaka izinsimbi noma izimila zamazinyo abavunyelwe ukusebenzisa umshini we-electrophoresis. Isizathu siwukuthi ukudlidliza komshini kungabangela ukuba ilunga lempande yezinyo lingahambi kahle, okubangela ubuhlungu kumsebenzisi.
Yisiphi isikhathi sosuku okufanele ngisebenzise i-essence pusher?
Idivayisi ingasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, kodwa isikhathi esingcono kakhulu kusihlwa. Ngoba lesi yisikhathi lapho unesikhathi esiningi samahhala sokwenza inqubo yokunakekelwa kwesikhumba. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa idivayisi ebusuku kuzosiza isikhumba ukuba sibambe kalula izakhi futhi sigweme ukuthintana nokungcola okuningi.
Kukusiphi isimo lapho isikhumba akufanele sisebenzise umshini we-electrophoresis essence?
Uma isikhumba sakho sinenxeba elivulekile, i-dermatitis noma sinezinduna ezinkulu, ungasebenzisi idivayisi. Ngoba umthelela womshini ungathinta le ndawo yesikhumba futhi wenze kube kubi kakhulu.
Nali ulwazi odinga ukulazi mayelana nemigqa best essence pusher edumile namuhla. Ngethemba ukuthi isihloko esingenhla sikusize ukuba ukhethe umshini ofanele wezidingo zakho zokunakekelwa kwesikhumba.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-9,434, ukuvakashelwa okungu-63 namuhla)
Hướng dẫn chặn cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại đơn giản | Muasalebang
Cách làm vịt quay chảo giòn rụm, thơm lừng, cực đơn giản tại nhà | Muasalebang